Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Fedora 16 | Kubva kuLinux
Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Fedora 16
Ubuntu iri kurasikirwa nevazhinji mafeni. Vazhinji vavo vakakurudzirwa kuyedza Fedora 16, yazvino vhezheni yeiyi inoshamisa distro.
Kana iwe uri mumwe weavo vakasarudza kutora iyo leap saka zvirokwazvo iyi posvo ichave yakakubatsira kwazvo.
Tisati tatanga, ngatitange nekumisikidza kodzero dzemutungamiri:
1 1. Gadziridza Fedora
2 Chinja Fedora kuita Spanish
3 3. Isa zvimwe zvekuchengetedza
4 4. Kuvandudza yum
5 5. Isa Nvidia mutyairi
6 6. Gadzira Gnome Shell
7 7. Isa odhiyo nemavhidhiyo codecs
8 8. Isa macodec ekuona maDVD
9 9. Isa Flash
10 10. Isa Java + Java plugin
11 11. Isa zip, rar, nezvimwe.
12 12. Isa LibreOffice muchiSpanish
13 13. Isa Waini
1. Gadziridza Fedora
Chinja Fedora kuita Spanish
Enda kuZviitiko> Zvishandiso> Zvirongwa zveSystem> Dunhu neMutauro uye sarudza Spanish.
3. Isa zvimwe zvekuchengetedza
yum localinstall --nogpgcheck http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release- solid.noarch.rpm
4. Kuvandudza yum
yum yakafanana neUbuntu's apt-tora. Nekuisa mashoma mapakeji isu tichaenda kunatsiridza uye nekuita kuti ishande nekukurumidza.
yum -y kuisa yum-plugin-inomhanyisa mhanyisa
yum -y kuisa yum-presto
yum -y kuisa yum-langpacks
5. Isa Nvidia mutyairi
Shandisa iyo RPM Fusion repository nemapazi emahara uye asiri emahara (ona nhanho 3)
Kuisa vatyairi veNVidia kubva kuRPMFusion repositories pane matatu anogona mirairo. Iwe unongoda kumhanya imwe yacho, asi kuti uzive kuti ndeipi, zvakakosha kuti uverenge zvinotevera:
akmod Iyi sarudzo yakanaka uye nzira iri nyore yekudzivirira matambudziko mukuvandudzwa kwekernel (iyi ndiyo sarudzo yakanaka mumaonero angu).
kmod Iyo inochengetedza zvishoma yediski nzvimbo asi iwe uchave nematambudziko neese kernel yekuvandudza uye nekudaro uchafanirwa kudzoreredza madhiraivha neiyo nyowani kernel.
Users of tsanga PAE (Kero Yemuviri Yekuwedzera). Kana iwe uri pane 32-bit system (i686) uye iwe uine PAE kernel yakaiswa kuti uwane yakawanda RAM. Muchiitiko icho icho kupera -PAE inowedzerwa kune "kmod" mapaketi. Semuenzaniso, kmod-nvidia-PAE. Izvi zvichaisa kernel module yePAE kernel panzvimbo yeyakajairwa 32-bit kernel.
Ramba uchifunga kuti kana iwe uri mushandisi we 32-bit system (i686) uye iwe uine 4Gb ye RAM kana zvimwe, zvingangoita kuti iwe une PAE kernel, saka shandisa iyo sarudzo. Kune rimwe divi, kana iwe uri mushandisi weiyo 64-bit system (x64_64), zvirokwazvo hauzove nePAE kernel, saka ini ndakangosarudza akmod kana kmod.
Pakangobviswa zvibodzwa, ini ndakasarudza imwe yeiyi matatu sarudzo:
yum kuisa akmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686
yum kuisa kmod-nvidia xorg-x11-drv-nvidia-libs.i686
Uchishandisa kmod-nvidia-PAE uye PAE-kernel devel
yum kuisa kernel-PAE-devel kmod-nvidia-PAE
Bvisa nouveau mumufananidzo initramfs.
dracut / bhuti / initramfs - $ (uname -r) .img $ (uname -r)
Tangazve komputa yako.
6. Gadzira Gnome Shell
Ichi chingave chinhu chekutanga chaunoda kuita mu fedora, yeuka kuti inouya neGnome 3.Shell interface.Kuti uigadzirise, zvakanakisa kuisa gnome-tweak-chishandiso kugadzirisa theme, mafonti, nezvimwe. Dconf-mupepeti inokutendera iwe kuti uwedzere kugadzirisa uye kugadzirisa Fedora.
yum kuisa gnome-tweak-chishandiso
yum kuisa dconf-mupepeti
7. Isa odhiyo nemavhidhiyo codecs
yum -y kuisa gstreamer-plugins-yakaipa gstreamer-plugins-yakaipa-isiri yemahara-mapulagi-akaipa gstreamer-ffmpeg
8. Isa macodec ekuona maDVD
yum kuisa libdvdread libdvdnav lsdvd libdvdcss
9. Isa Flash
yum -y kuisa flash-plugin
10. Isa Java + Java plugin
yum -y kuisa java-1.6.0-openjdk
yum -y kuisa java-1.6.0-openjdk-plugin
11. Isa zip, rar, nezvimwe.
yum -y kuisa unrar p7zip p7zip-plugins
12. Isa LibreOffice muchiSpanish
yum kuisa libreoffice-munyori libreoffice-calc libreoffice-fadza libreoffice-dhiza libreoffice-langpack-en
13. Isa Waini
yum kuisa waini
yum -y kuisa cabextract
Iwe unogona zvakare gadza Winetricks (seti yeDLLs inofanirwa kuitiswa zvimwe zvirongwa zveWindows). Pane imwe yaiswa, unogona kuimhanya seizvi: / usr / bin / winetricks
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » FileLet's UseLinux » Zvaunofanira kuita mushure mekuisa Fedora 16
Ndinoona kana iri tambo ndobva ndavandudza imwe neimwe? semuenzaniso vlc inoisa vhezheni 1.Xxx uye mune zvinyorwa vane vhezheni yechipiri kana ndichida kuiisa ndinofanira kuisa mapakeji ayo zvakasiyana, ndatenda.
Mhoroi ini ndine mubvunzo, ini ndoda kuisa iyo rpm fusion mapakeji e fedora 16, iyo inogadziridza - Nonfree ye x86_64 asi handizive sei, ungandiudza sei kuzviita kana kundipa mutsara wandaifanira kuunzira the terminal, ndatenda.
Kune avo vane 64-bit komputa, iyo repository yakasiyana # rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-x86_64-1.0-1.noarch.rpm
Iyo inokosheswa, iwo marongero akaiswa zvakanaka, zvirinani pane zvimwe zvinyorwa zvandakashanyira. ndatenda!!!!!!!!!!!!!!
Zvakanaka zvese zvakanaka, asi zvinoitika kuti handikwanise kuchinja kupenya kwescreen yangu sezvandakaita ndisati ndaisa Nvidia, unogona kundiudza kuti ndinoita sei (kuwedzera kupenya kwescreen kana kuidzikisa) naNvidia?
ZVAKANAKA. Kutenda kune iyo data!
Zvakanaka kwazvo izvo,
Mhoro, yakanaka kwazvo posvo, zvese zvakafamba mushe, ndakaisa fedora 16 verne mune yangu packard bhero nekamubatanidzwa kamera, mumwe munhu anoziva zvandinofanira kuita kuti kamera ishande neyangu yekushandisa system sezvo ini ndichimhanya chesse uye iyo skrini inowoneka nhema uye mazhinji eUnovawana ndeemubuntu kwandakaverenga kuti kana zvichibvira ndatenda pamberi
Andres M. Forero Murillo akadaro
Ini ndichangobva kuisa iyo 64-bit vhezheni uye mushure mekuita zvinyorwa zvekutanga uye nekuisa odhiyo macodec, kuridzwa kwekutamba kunotyisa, kunogara kuchisvetuka, zvese neRhytmbox uye iyo Exaile. Ndisati ndadaro, ndakaedza mamwe mafaera muFLAC fomati uye vakatamba mushe, mushure mekuita zvandataura, kunyangwe aya anotamba zvakanaka. Chinhu chimwe chete ichocho chakange chaitika kwandiri ine 32-bit vhezheni uye ndakafunga kuti kuisa iyo 64-bit vhezheni ndiyo ichava mhinduro. Chero mwenje kwandiri? Ini ndatsvaga kwenguva yakareba paGoogle uye hapana chandinowana mhinduro, ndatenda nekuteerera kwako.
Pindura Andres M. Forero Murillo
july mendez akadaro
Ichi chinyorwa chakanakisa, uye pane ino peji isu tinogona kuenderera nekuwedzera kuwedzera maficha.
Pindura kuna julio mendez
Iyo RPM Fusion ivhavha kune ese madhiraivha epamutemo aripo uye zvese zvine kodzero zvinogona kuwanikwa kubva pano.
Kuisa iyi repository:
yum kuisa http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-stable.noarch.rpm http://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-stable.noarch.rpm
Ipapo, iwe unofanirwa kuisa mapakeji iwe auri kutsvaga: gstreamer, nezvimwe.
Luis Fabricio Escalier akadaro
yakanaka posvo ... Ndakamira kushandisa ubuntu kuyedza Fedora, chokwadi ndechekuti inokurumidza, zvirinani kuti ndinozviona saizvozvo. Zvakadaro, Ubuntu yakanaka kwazvo, ndakaifarira zvakanyanya, asi chii chakandikwezva kuFedora ndiyo Gnome Desktop Nzvimbo.
Pindura kuna Luis Fabricio Escalier
Edgar vizuete akadaro
Ini ndichatevera matanho acho akanaka kwazvo
Pindura Edgar Vizuete
Seimwe nzira kune nhanho 11 ini ndinotaura zvinotevera:
yum -y kuisa faira-roller
Hei, posvo yacho yakanaka. Ndiri kufara kuziva kuti Fedora chikamu cheblog rako zvakare nekuti ini ndiri mumwe wevashandisi vako. Kana zvichibvira, zvakare edza kupa Fedora Utils chigamba, nekuti inogona kunge iri imwe sarudzo yekuita mushure mekuisa nyowani kweFedora. Kana risina kunetsa zvakanyanya, ini ndinokusiira iwe link nezvazvo http://hpubuntu.wordpress.com/2011/11/12/jugando-con-fedora-utils/
Kubvunzana neushingi naMark Shuttlewoth [Humor]
Indaneti haidi kutora SOUP